Kukurumidzisa YeMota Chigadzirwa Kuvandudza / Createproto - Createproto Tech Co, Ltd.
INDUSTRIES / ZveMotokari
Kukurumidzisa YeMotokari Chigadzirwa Kuvandudza
GadziraProto iri kutarisa kune mota prototyping seyakazara sevhisi iyo yakatibvumidza isu kuwedzera zivo yedu uye ruzivo munzvimbo ino. Hazvina mhosva kubva kuumbowo hwepfungwa dhizaini kune mechiniki yezvinhu mainjiniya bvunzo, kana kubva kunze kwekuvhenekesa prototypes kune yemukati yezvinhu prototypes, isu tinokwanisa kutsigira pamatanho ese.
Kunda unogara uchipfupisa zvigadzirwa zvekuvandudza zvigadzirwa uye gadzira chinopa cheni chinja nekukurumidza prototyping uye yakaderera-vhoriyamu kugadzirwa
Iyo indasitiri yemotokari iri kuchinja nekukurumidza. Sezvo maindasitiri mafambiro senge kutyaira kwakazvimiririra, kubatika-bhodhi, uye mota dzakauchikwa / dzemagetsi kuenderera mberi nekutyaira, makambani anomhanyisa mota ari kutendeukira kuChechiProto kuti ikurumidze kugadzirwa kwechigadzirwa chitsva uye kusvika kumusika nekukurumidza. Nekukurumidza-shandura kudhijitari dhizaini uye otomatiki manufacturability mhinduro, vagadziri uye mainjiniya vanogona kudzora dhizaini uye kudhura kwengozi pavanenge vachigadzira chinoteerera chinopa cheni yekuita zvirinani kune mutyairi uye mutakurwi kudiwa kwemamwe akagadzirwa mota.
Rapid Prototyping Kutyaira Zvemotokari Kugadziridza
Prototyping Inokurumidzira YeMota Ekuvandudza Matanho
Iyo indasitiri yemotokari indasitiri yakaoma uye hombe, yakatarisana nekumanikidzwa kwemusika inoda kuitirwa kakawanda dhizaini uye kuvandudzwa kwekugadzirwa patsva. Nekudaro, iyo dhizaini dhizaini uye kusimudzira kutenderera ndeyeyakareba maitiro, nekukurumidza uye kwakaringana prototyping ibasa rinofanirwa-kuva naro. YeMota prototype inomiririra yakakosha nhanho mune yekusimbisa maitiro pakati pekutanga chigadzirwa dhizaini uye yekupedzisira kugadzirwa kumhanya.
Muchokwadi, mota prototyping haina chete inoita basa rakakosha panguva yekugadzira dhizaini, asi zvakare inovimbisa kuti zvikamu zvinogadzirwa neakanakisa akakodzera zvinhu, uye inoongorora iyo yekugadzira maitiro.
Zvemota prototypes zvikamu zvakakosha zveyese mota yemainjiniya maitiro ayo anotendera mainjiniya kuti vafunge maitiro ekugadzira zvigadzirwa zvitsva zvemotokari kune vatengi, kutaurirana mazano kune vanobatika uye mapurojekiti zvikwata nekukurumidza uye nemazvo, uye kuratidza kukosha kwedhizaini kune anokwanisa vatengesi uye vatengi.
Chaizvoizvo, yekugadzira mota prototype yekugadzira inogara ichimhanya mukati medanho rese remotokari dhizaini uye kusimudzira kutenderera, kusanganisira humbowo hwepfungwa, kutaridzika kweiyo CAD yedhijitari modhi, chimiro uye kuita kwekuita, kuita uye kuyedza kweinjiniya, uye kunyangwe yekugadzira nekugadzira. maitiro ekusimbisa.
YeMotokari Concept Prototype uye CAD Dhijitari Model
Munguva yeiyo dhizaini dhizaini uye 3D CAD modhi chikamu, vagadziri vemotokari vanoona mazano kuzvinhu chaizvo nekugadzira zviyero zvechimiro muchimiro chemuenzaniso wevhu. Iyo inogona kuvapa ivo nemaune hwaro mudanho repfungwa dhizaini. Gare gare reverse enjiniya matekinoroji anoshandiswa kuongorora iyo modhi kuwana iwo maCAD mamodheru uye kunyatsoita dhizaini.
Iyi yekumberi uye yekutaurirana hurukuro pakati pekugadzira uye mota prototype inogadzira iterative maitiro uko chishandiso chega chega chinoratidza mikana mitsva nematambudziko ekuongorora nekuenderera mberi nekunatsa, uye zvinobatsira vagadziri kuti vanzwisise zvirinani ruzivo rwevashandisi. Izvi zvinoshanda zvese kunze - zvichipa kune vatengi uye vanobatika - uye mukati - mukubatana zvakadzama nechikwata chako, kana kuvaunganidza kuti vatsigire zano idzva.
Iyo Structure uye Rinoshanda Revhisi yeMotokari
Kamwe dhizaini dhizaini yasimbiswa, mainjiniya dhizaini inoda imwe yakanatswa prototype kuona kushandisika kwechigadzirwa uye kutsvedza chero dhizaini dhizaini.
Vanjinjini dzemotokari dzimwe nguva vanoreva izvi se "danho renyurusi." Pakati peiyi nhanho, mainjiniya achagadzira akateedzana emota anoshanda, uye voisa zvigadzirwa zvemumota mumota dziripo. Sekureva kwekuvandudzwa kwemamodeli akasiyana uye kushandiswa kweiyo nyurusi, prototype inowanzo shandiswa fomu fomu cheki yechinzvimbo nzvimbo uye yekutanga dhizaini yekuita data yemotokari.
Iri zano rinovatendera kuti vaone kuti mota yemota inokwana sei mumotokari uye nekudyidzana nezvimwe zvikamu, uye kubatsira kuongorora dhizaini, zvishandiso, simba, kushivirira, gungano, mashandiro ekuita, uye kugadzirwa.
Injiniya Kuedza uye Pre-kugadzirwa Verification
Chikamu chemotokari chisati chapinda mukugadzirwa, mainjiniya anozogadzira yakaderera-vhoriyamu bvunzo yeprototypes uye pre-yekugadzira zvikamu zvinoteedzera chigadzirwa chekupedzisira, uye nekukurumidza kudzora dhizaini yavo zvinoenderana nekuyedza chaiko uye mhinduro kuti vasangane nebasa rinodiwa, kuongorora, kuyedza, chitupa uye hunhu zvinodiwa.
YeMota prototype yakakosha pakuongorora kwekuchengetedza. Dzemota dzemhando yepamusoro dzakatakurwa nechikamu chekuyedza dzinoiswa kuburikidza nemamiriro akasiyana uye dzinoiswa kumamiriro ezvinhu akaipisisa kuti dzione chero matambudziko anogona kukanganisa kushandiswa kwechigadzirwa kana kukonzera kushushikana kwakanyanya kune vatengi.
Zvichakadaro, kugadzira yakaderera-vhoriyamu yekugadzira zvikamu zvemotokari nyowani chigadzirwa mutyairi anotendera mainjiniya kuti vaone zvingangodaro matambudziko ekugadzira pamwe nekuona anodhura-anoshanda maitiro ekugadzira.
Ndeapi Machira Anoshanda Zvakanakisa kune ZveMotokari Zvishandiso?
Thermoplastics. Sarudza kubva kumazana e thermoplastics anosanganisira PEEK, acetal, kana kugovera yako pachako zvinhu. Chengetedza kuburitsa neyakajairika colorant kune akakodzera mapurojekiti.
Liquid Silicone Rubber.Silicone rabha zvinhu zvakadai semafuta-asingagadzirwe fluorosilicone inogona kushandiswa kune gaskets, zvisimbiso, uye tubing. Iyo yakajeka yakajeka silicone rabha inowanikwawo kune lens uye magetsi ekushandisa.
Nylon.3D yekudhinda inoshanda prototypes mune akati wandei zvinhu zveyiloni zvinowanikwa kuburikidza nekusarudza laser sintering uye Multi Jet Fusion. Mineral- uye girazi-rakazadza nylon dzinovandudza michina zvimiro pazvinenge zvichidikanwa.
Aluminium. Iyi yesimbi-yechinangwa simbi inoshandiswa kuyera-kuyera inopa yakanakisa simba-kune-huremu reshiyo uye inogona kugadzirwa kana 3D kudhindwa.
Nei GadziraProto Yekuvandudza Kwemotokari?
Deredza dhizaini dhizaini kuburikidza nekukasira iteration uye prototyping mune zvigadzirwa zvekugadzira pasina kupira kusimudzira kukurumidza.
Supply Chain Kuchinja-chinja
Tora pane-kudiwa rutsigiro rwemutsetse-pasi zvashata, chikamu chinorangarira, kana kumwe kukanganisa kwekutengeswa muzvirimwa zvako zvekugadzira uchishandisa otomatiki kutora mazwi, kukurumidza maturu, uye mashoma-vhoriyamu ekugadzira zvikamu.
Validate chikamu geometry ine akati wandei emhando zvinyorwa zvinyorwa. Dhijitari kuongorora, PPAP, uye FAI kuzivisa zviripo.
Shandisai yakaderera-vhoriyamu yekugadzira kuti igone zvimwe zvakasiyana uye zvakagadziriswa zvemotokari maficha akagadzirirwa kune vatyairi vemazuva ano.
Tooling uye Fixtures
Kuvandudza maitiro ekugadzira kuti agadzire yakakura otomatiki uye yakarongedzwa chikamu chemusangano neyakajairwa fixturing.
GadziraProto's YeMota Yekudzivirira Tekinoroji Kwese Kwenharaunda Mune Yako Maitiro
Iine anopfuura makore gumi einjiniya uye prototyping hunyanzvi, GadziraProto inokura mune zvine hunyanzvi mapurojekiti emota prototype engineering. Isu tinovavarira kuve wako akanakisa azere sevhisi chigadzirwa kusimudzira mudiwa mune mota indasitiri. Isu tinogadzira mumhando dzakasiyana dzemotokari prototyping zviitiko uye nekukurumidza kugadzira tekinoroji, ichipa CNC machining, 3D kudhinda, yekuvharisa vhoriyamu, inokurumidza aruminiyamu tooling, yakaderera vhoriyamu jekiseni kuumbwa, uye jira simbi kugadzira, iyo inochengetedza kukwikwidza kumucheto nehunyanzvi sevhisi uye ine hunyanzvi vashandi . Tichashanda pamwe - uye newe - padanho rega rega rekugadzirwa kwemotokari uye kuita kwekuvandudza.
Kubva kuzere kwemukati kuseka-kumusoro kunosanganisira madhibhodhi, zvinyaradzo, mapanhi emusuwo uye mbiru kune zvekunze zvinhu zvakaita semabhuru, magirazi, mwenje uye mataiti emwenje ekuvhenekesa prototypes, timu yedu inovimba neayo epamberi ekugadzira michina maitiro portfolio, uye ichivhenganisa izvi nepamusoro pekupedzisa mashandiro, echinyakare. hunyanzvi hwemaoko, uye zvakadzama kuziva-nzira yekutsigira pamatanho ese eiyo auto indasitiri.
Yedu hombe pfuma yedu yevatengi base yakawedzera nekukurumidza kuburikidza nevatengi veshoko-remuromo kutenderera pasirese. Isu tinodada uye tinokudzwa kupa yakakwana prototype yekugadzira mhinduro kune vamwe vevatungamiriri vepasi rose vevatengesi vemotokari uye tier one vatengesi, vakadai seBMW, Bentley, Volkswagen, Audi uye Skoda. Chinangwa chedu ndechekupfuura zvinotarisirwa nevatengi uye nekuvabatsira kubudirira mumusika.
Yedu yedhijitari yekugadzira kugona inokwenenzvera kusimudzira kwehuwandu hwesimbi nemapurasitiki emota zvikamu. Zvishoma zveakajairika mota zvinoshandiswa zvinosanganisira:
Gungano mutsara mutsara
Mapurasitiki dash zvikamu
Lenses uye mwenje maficha
Rutsigiro rwe-bhodhi mutengi zvemagetsi
-Automaker: mazuva ano anoda mamwe maficha akarongedzwa mumapakeji madiki. Ndiro dambudziko redu, kuisa zvese izvo zvinoshanda mupakeji diki.
Cnc Kuchengetedza, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Kurumidza Prototyping, Cnc Rapid Prototyping, Kukurumidza Prototyping,